PSJTV | नेजा आठसय एक नहोस !
एउटा नयाँ संस्था जन्मनु पहिलेनै व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा समूह बाँडियो भने संस्थाको अवस्था के हुन्छ? त्यही हुन्छ, जो अहिले नेजाको छ।
बिहिबार, २१ असार २०७५ राजेश मिश्र
हुने बिरुवाको चिल्लो पात! हाम्रो नेपाली समाजको प्रचलित उखान हो यो।
साथीहरुलाई मेरो कुरा निहुँखोजा लागे क्षमाप्रार्थी छु। तर मलाई छाती ठोकेर भन्न कुनै संकोच छैन, नेपाल अमेरिका जर्नलिष्ट एसोशिएशन, जसलाई हामी मायाले छोटकरीमा "नेजा" भन्छौं, जन्मदै खश्रो पात मात्र होईन, गैंडाको जस्तो काउकुती नलाग्ने बाक्लो छाला सहित जन्मिएको एउटा सामुहिक उद्देश्य बिहीन संस्था हो। यो संस्था र अमेरिकामा दर्ता भएका अन्य जातीय वा क्षेत्रिय संस्थाहरुबीच कुनै अन्तर नदेखिनु आफूलाई समाजका हरेक कर्म र कुकर्मको ठोस परिभाषा दिने गहन दायित्व बोकेर मैदानमा उत्रिएका पत्रकार नेताहरुका लागि लज्जाको बिषय हो।
मेरो खोरिया कसैले फांडेको छैन। न त मैले नै कसैको कर्कलो बारी निमोठेको छु। यहाँ व्यक्तिगत रीस र रागको कुरा छैन। तर कुनै एउटा नयाँ संस्था जन्मनु पहिलेनै व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा समूह बाँडियो भने संस्थाको अवस्था के हुन्छ? त्यही हुन्छ, जो अहिले नेजाको छ।
यी हरफमा भनिएका कुरा व्यक्तिगत होइनन् , तर साक्षीभावमा आधारित यथार्थ हुन्। नेजाको सन् २००७ अप्रीलमा आयोजित भर्जिनियाको पहिलो ऐतिहासिक अधिवेशनमा यो लेखकले पनि सहभागी हुने मौका पाएको थियो। त्यो वातावरण एउटा उत्सव भन्दा कम थिएन। लेखकले उमेर, अनुभव र पदका आधारमा दाई भन्नुपर्ने एकजना तारा बराल बाहेक अरु सबै समवयी नै थिए। सबैमा उत्साह थियो।
बिना लफडा चुनाव सम्पन्न भयो। अलि अलि भयो होला, तर त्यो होटलको कोठा सीमित भएर होला, बाहिर त्यसको गुञ्जन सुनिएन। चुनावमा त्यतिबेला जसले जिते, उनीहरुले आआफ्नो "रिज्युमे" मा एउटा नयाँ खाता खोले। तर "नेजा" लाई आधिकारिक अमेरिकी गैर मुनाफा मूलक संस्थाका रुपमा दर्ता गर्नुलाई आफ्नो जिम्मेवारी ठानेनन्। पात खश्रो हुनथाल्यो।
त्यतिबेला अंग्रेजीमा ठूला ठूला कुरा लेखेर सभापति पद पड्काउने व्यक्ति अहिले अमेरिकाको सेतो घरमा नेपाली भाषा अनुवाद गर्ने जागिरे छन्। उनले नेजाको लागि माखो मारेको अभिलेख कतै देखिंदैन। हामीले हावाको तालमा उनलाई ठूलो मान्छे बनायौं। उनी ठूला मान्छे भएका छन्। उनलाई शुभकामना।
त्यसपछि पनि नेजाको दोश्रो अधिवेशनले हावादारी तालमै अर्को सभापतिलाई जितायो। उनी आफ्नो उन्नत भविष्यको खोजीमा कार्यकाल पुरा नहुँदै नेजालाई धन्यवाद पनि नभनी कुलेलाम ठोके। तेश्रो अधिवेशनबाट चुनिएका आङ्ग छिरिङ्ग शेर्पाले, ६ बर्ष पछि नेजालाई न्यु योर्कको कानून मुताविक ५०१ (सी) अन्तर्गत गैर मुनाफा मूलक संस्थाका रुपमा दर्ता गराए।
उनका उत्तराधिकारी गौतम दाहालले यो दर्ता भएको संस्था मार्फत "मानव तस्करी" गरेको आरोप लाग्यो। यही मुद्दालाई आधार बनाएर एक तिहाई सदस्यहरु संस्था छोडेर हिंडे। अहिले उनीहरु फर्किन थालेका छन्। तर बिडम्बना ! गौतम दाहालले गरेको कर्म कुकर्म हो वा सत्कर्म भन्ने छानवीन गर्ने अधिकार प्राप्त वर्तमान कार्यसमितिका उपाद्द्यक्ष गुणराज लुइंटेल आफ्नो कार्यकाल र जिम्मेवारी पुरा नगरी राजिनामा दिएर हिंडे। नेजामा यो के भएको हो?
हामी नेपालीहरु एउटै प्रजातिको बीउ अनि एउटै बारीको माटोमा फलेका आलू हौँ।
अठार बर्ष अमेरिका प्रवासमा यो लेखकले नेपाली बाहेक अन्य समुदायसंग पनि घुलमिल गर्ने मौका पायो। त्यो अनुभवले नेपाली हुनुमा कता कता ग्लानी महशुश हुन्छ। यहूदीले कमाएको एक डलर कमसेकम एक सय जना यहुदीहरुको हातको स्पर्श नगरी आफ्नो समुदायबाट बाहिर जाँदैन। उनीहरु आफ्नो समुदायको कुनै परिवारमा नयाँ जन्म भएको छ भने खानेकुरा, खेलौना र लुगाफाटा लाई उपहार बनाएर लैजांदैनन्। त्यो एकदिन बिग्रिन्छ, फाट्छ, सकिन्छ। उनीहरु नवाजातका नाममा अहिलेदेखिनै सबै मिलेर ब्याङ्क खाता खोलिदिन्छन्। त्यो नवाजातले भोली कलेज पढ्न कसैको "लोन" लिनुपर्दैन।
चिनियाँ व्यापारीहरु अमेरिकामा एउटा कोष खडा गर्छन। सबैले आफ्नो आयको केही प्रतिशत त्यो कोषमा जम्मा गर्छन, हरेक महिना। एउटा चिनियाँको ब्यापार डुब्छ, तर उसको जहाज डुब्दैन। त्यो कोषको पैसाले उसलाई पुनर्स्थापित गर्छ। उसले कोषको दायित्व बिस्तारै तिर्दै जान्छ।
भारतीयहरुको समुदायमा यो व्यवस्था उहिलेदेखि कायम छ। त्यसैले यी समुदाय यहाँ बलिया मात्र छैनन्, सरकारी नीति र कार्यक्रम प्रभावित गर्ने स्थिति र स्तरमा पुगेका छन्।
अनि हामी? सगरमाथा, बुद्द र तीब्बतमा बनेको थाङ्का देखाएर नेपाली पहिचान कायम गर्छौं। सन् २००९ तिर मेरिल्याण्डमा एउटा नेपाली दम्पतीले बडो जोखिम लिएर नेपाली बहूल क्षेत्रमै एउटा "ग्रोसरी" पसल खोलेको थियो। संगैको नेपालीको पसलमा कुनै नेपाली गएनन्। उनीहरु दुई माईल टाढा "ग्यास" खर्च गरेर भैयाको पसलमा गए, नेपालीकोमा गएनन्। किन होला? कोलोराडोमा नेवा द:बू भन्ने नेवारहरुको एउटा संस्था थियो। त्यहाँ संखुवासभाका एकजना नेवार सभापति थिए। राजधानी काठमान्डौ बाहिरका नेवारहरु प्राय नेवारी बोल्न जान्दैनन्।
बिस्तारै कोलोराडोमा काठमान्डौका नेवारहरुको पनि उपस्थिति बढ्यो। त्यसपछि, "नेवार बोल्न पनि नजान्ने मान्छे नेवार संस्थाको सभापति हुन सक्दैन," भन्ने आधारमा त्यो नेवा द:बू नामको संस्था फुट्यो। यो सन् २०१३ तिरको कुरा हो। त्यही ताका कोलोराडोमै "बैठकमा गुरुङ भाषा बोल्न लाज मान्ने" सभापति बिरुद्द अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदै गुरुङहरुको समाज "तमू धीं" फुट्यो। फुट्नु हाम्रो नियति हो।
अमेरिकामा नेपालीहरुको संख्या कति होला? हामी कसैलाई थाह छैन। एनआरएन एनसीसीमा दर्ता भएका भोट हाल्न लायक हरुको संख्या १५ हजार पनि छैन। तर अनुमानका भरमा चार देखि पांच लाख भन्ने गरिन्छ। नेजाका नेताहरुलाई यो संख्याको निकटतम अंक थाहा हुनुपर्ने हो। तर छैन। किनभने नेजाले यस्ता आवश्यक कुरामा समय, श्रोत र सामर्थ्य खर्च गर्ने तर्फ सोचेकै छैन। अमेरिकामा नेपाली नामका झन्डै आठ सय संस्था दर्ता छन् भन्ने एउटा अनुमान छ। त्यो भन्दा कम पनि हुनसक्छ, बढी पनि। यी संस्थाहरु भन्दा फरक रुपले प्रस्तुत हुन, समाजमा नतिजा देखाउन र समाजलाई भविष्यको गन्तब्य पहिल्याउन नेजाले सहायकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ?
यस्ता अधिवेशन आउंछन् अनि जान्छन। पत्रकार समाजका आँखा हुन्, पत्रकारिता समाजको ऐना। सुन्दा गजब आदर्शमय लाग्छ। अनि हाम्रो धरातल के हो ? हामीले समुदायलाई कुन बाटोमा डोर्याएका छौं? अहिले सम्मको नेजा नेतृत्वले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको छैन। नचाहेर होईन होला, नसकेर।
गर्न नसकिने कुरा आफ्नो वेबसाईटमा राखेर झूठ नबोलौं। यसलाई भूतपूर्व पत्रकारहरुको आत्मतुष्टिका लागि खोलिएको एउटा पारिवारिक क्लबमा रुपान्तरित गर्दा बेश। होईन भने, कलम बोकेर नेपाली समुदायको उत्थानमा लेख्ने साहस गरौँ। आठ सय संस्थाहरुको हुलमा नेजा आठ सय एक नहोस।
नेपाली अमेरिकी समुदायलाई सचेत र सुसूचित तुल्याउने जिम्मेवारी नेजाको नभए अरु कसको हो ? तर कल्पनाशीलताको गरीब र बौद्दिक रुपले नीरिह नेजाबाट धेरै आशा गर्नु पनि अहिलेको स्थितिमा नेताहरुप्रति अन्याय नै हुनेछ। जो संग जे छ, उसले त्यही दिन्छ।
मेरो यो लेख नेजाको आगामी अधिवेशनमा प्रकाशित हुने "प्रयास" नामक स्मारिकाका लागि अस्वीकृत भयो। सम्पादन मण्डलका साथीहरुमध्ये एक लेखनाथ भण्डारीले मलाई पठाएको ईमेल जस्ताको तस्तै :
नमस्कार राजेश जी
तपाईंको लेख पढें । तपाईंको सहृदयी चासो तत्परता र सहयोगका लागि धन्यवाद ।
समग्रमा तपाईंको सन्देश र निष्कर्ष पनि अमेरिकमा नेपाली समाज संस्थाहरु किन दह्रोसँग उभिन सकेनन् वा किन अमेरिकी समाजको मूलधारमा अमेरिकी नेपाली समाज जोडिन सकेनन् भन्ने नै हो । यसमा भएका कमिकमजोरीहरूमा केही मबाट भए केही तपाईंबाट वा अरु कसैबाट तर जसले सकेको जानेको केही गर्न प्रयास गर्यौ उसैबाट नै भयो । अबको हाम्रो बाटो गल्ति नदोहोर्याउने त छँदै छ बाँकी के राम्रो गर्न सकिन्छ तपाईंको ज्ञान सिप र अनुभवको मार्गनिर्देश यता हुने विश्वास छ ।
काम गर्दै र सिकड़ी जाने क्रममा हामी सबैबाट केही कमीकमजोरी भए होलान् ती यथार्थ नै सही तर सम्बन्धित संस्थाको मुखपत्रमा सम्बन्धित संस्थाका सदस्य वा पूर्व पधाधिकारीहरूलाई संस्थाकै अर्को सदस्यले त्यसप्रकारको आक्षेप लगाएको लेख राख्नु सान्दर्भिक हुन्न यद्यपी लेखमा मेरो बारेमा कुनै टिप्पणी छैन । पहिलो कुरा त तापईं स्वयम् नेजाको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ,यसको मूल उदेश्य यती मात्र हो - नेपालबाट अमेरिका आएका पत्रकारितासँग सम्बन्धित साथीहरुकाबिच मर्यादित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध/नेटवर्क बनाउने । हाम्रा लागि यस भूगोलको जटिलता र अज्ञानताका कारण जानी नजानी उदेश्यप्राप्तिका पक्षमा केही थपघट प्रयासहरु भएका हुन र हुँदै जानेछन ।
प्रस्तुत लेखले नेजामा सुधार वा अग्रगतिका लागि कुनै सहयोगी भूमिका पनि खेल्दैन । हामी एक डेढ सय साथीहरू त मिलेर सहकार्य गर्न सकेका छैनौं भने त्योभन्दा ठूलो समग्र नेपाली समाजलाई हामी मेलमिलाप गर्नु पर्छ भन्न वा मिलाउन कसरी सक्छौं र ?
तपाईं हामी सबै एकै मूलको पानी खाएका साथी संगी नै हौँ, हुनसक्छ कोही १९-२० छौं । साथीहरूले सकेको जानेको गरी नै रहनु भएको छ,नियतबस नैतिक वा कानुनी सिमा नै नाघेको छु मैले भने म पनि भन्दिन मलाई उन्मुक्ति दिनुहोस तर काम गर्दै र सिक्दै जाने हो । एकै छाना मुनीको चुलो चौकमा बसेर लाए खाएर बसेपछि भाँडा वर्तन पनि ठोकिन्छन ।
हामीमा पनि त्यस्तै हुनु स्वाभाविक नै थियो,भयो तर जानी जानी कसैले कसैलाई लातीले नहानौं र ढोका पनि नथुनौं । आजको भोलि नै न मैले कुनै चमत्कार गर्न सक्छु न अरू कोही साथीहरूले नै । त्यसमा पनि तपाईं र म त टाढा नै बसेर रमिता मात्र न हेरिरहेका छौं । मैले कहिल्यै कुनै साथीहरूलाई यसो गरौँ वा त्यसो गर्न हुन्न भनेर भन्न सकेको भ्याएको पो कहाँ हो ? तपाईंलाई पनि यो घनचक्करमा तेती धेरै फुर्सद पो कहाँ छ होला र ?
अहिले राजेशजी तपाईंले त्यति लेख्नु भयो, भोलि सुरेश जीले अर्को कुरा लेख्नु हुन्छ अनि पर्सी मैले त्यसको प्रतिवाद गर्छु । मैले तपाईंको अनुहारमा हानेको हिलोको केही छिटा मेरै अनुहारमा पर्छ तर मेरो अनुहारको हिलो मैले नदेखे पनि समाजले त देखिरहेको हुन्छ । समाजले हामी दूवैलाई नियाली रहेकै हुन्छ । कम्तिमा तपाईं हामी यसप्रकारको प्रतिष्पर्धामा नलागौं । हामी सबैले आफूसँग भएको नै अलिअलि साँधसूँध मरमसला गरेर एक अर्कोलाई दिने हो | तसर्थ म यस्मा तपाईंलाई के विशेष अनुरोध गर्दछु भने तपाईं हामी कम्तिमा यस्मा विवाद नगरौं | तपाईंले यो भन्दा अरु धेरै विषयहहरुमा योभन्दा पनि धेरै राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ |
तपाईंको ज्ञान सिप र अनुभव हाम्रा लागि उपयोगी र उदाहरणीय होस भन्ने मेरो अपेक्षा र अनुरोध हो | संस्थाको मर्यादा र सदस्य साथीहरुको सम्मानका लागि हामीले राजेश जि तपाईंको यो लेख प्रयासमा राख्नु हुँदैन | नेपाली समाजले अमेरिकामा किन दह्रो भएर खुट्टा टेक्न सकेनन् भन्ने सन्दर्भमा तपाईंले यो लेखलाई सामान्य सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र गरे राम्रो | तपाईंको रुची र अनुकुलाताका बारेमा जानकारी दिनु है । अन्यथा असुविधाका लागि क्षमा प्रार्थी छु ।
नोट: यो ईमेल 'प्रयास' नवौं अङ्क प्रकाशनका तयारीमा रहनु भएका नेजाका अन्य केहि साथीहरूलाई पनि CC गरेको छु ।
काठमाडौं: संसदीय सुनुवाइ समितिले कुवेत, क्यानाडा र स्वीट्जरल्यान्डका लागि प्रस्तावित तीन राजदूतको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले कुवेतका लागि दुर्गाप्रसाद भण्डारी, क्यानाडाका लागि ...